Fanajana ny tontolo iainana: nihaino ny fanankianana ny ONE | NewsMada
Fanajana ny tontolo iainana: nihaino ny fanankianana ny ONE
Miaiky ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE), fa voafetra ny hoenti-manan’izy ireo hanatanterahany ny asany. Na izany aza, raisiny ny fanankianan’ny rehetra entina hanatsarana bebe kokoa ny fanajana ny tontolo iainana.
Nikarakara fihaonambe ho an’ny besinimaro ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE) tetsy amin’ny foibeny Antaninarenina. Nambaran’ny tale jeneraly (DG), Ampilahy Laurent, fa tanjona tamin’ity fihaonana ity ny handraisana ny hevitry ny daholobe, indrindra ny fanankianana, entina hanatsarana ny ho avy. Nitatitra ny zava-misy eo amin’ny fiharian’ny isan-tsehatra avy, mahakasika ny fahazoan-dalana amin’ny tontolo iainana, ny fanaraha-maso ny fiharian’ny orinasa, na ny tetikasa samihafa.
Ho an’ny taona 2019, nahatratra 906 ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana nozarain’ny ONE. Miisa 762 ny Fanadihadiana ara-tontolo iainana (EIE) nomena ary 144 ny Fampanarahana araka ny toetr’andro ny fanadihadiana ara- tontolo iainana (MEC). Mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ny 35%-n’ireo mpisehatra, amin’ny indostria ny 18%, amin’ny tontolo mananaina ny 8%, amin’ny angovo ny 6%, amin’ny fizahantany ny 6%, amin’ny fifandraisan-davitra ny 6% ary amin’ny fotodrafitrasa ny 6%.
Nandritra ny fihainoana ny fanehoan-kevitry ny mpanatrika, nambaran’ny filohan’ny filakevi-pitantanan’ny Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto, anisan’ny ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena (OSC), fa tsy ampy na tsy misy mihitsy ny fanatonana ny fakan-kevitra mivantana ny mponina eny ifotony. Hany ka maro ny manohitra ny tetikasa avy eo. Soso-kevitra naroson’ny AVG koa ny tokony hamoahana lalàna, mamaritra fa ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana no takina sy havoaka mialoha, vao mandeha ny fahazon-dalana hitrandraka, satria ny mifamadika amin’izany no zava-misy ankehitriny. Eo koa ny ahiahy mety hisian’ny kolikoly, satria araka ny lalàna, ny orinasa na ilay tetikasa no miantoka ara-bola ny ONE hidinana eny ifotony mikasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Vonona ny hifanohana sy hiara-kiasa amin’ny ONE ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, amin’ny alalan’ilay vovonana Henika.
Niaiky ireo ny DG-n‘ny ONE, satria tsy ampy ny hoenti-manan’izy ireo, sady izay rahateo ny voalazan’ny lalàna. “Mila jerena mandritra ny fandinihana ny fanavaozana ny didim-panjakana mikasika ny fampanarahana araka ny toetr’andro ny fanadihadiana ara-tontolo iainana (Mecie)”, hoy ihany izy.
Mikasika ny fandaharanasa Tanamasoandro, notsorin’ny tale jeneraly, fa araka ny lalàna, tokony hanana fanadihadiana ara-tontolo iainana daholo ny tetikasa na ny fihariana rehetra ataon’ny tsy miankina sy ny fanjakana. Efa misy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana mikasika ity tetikasan’ny fanjakana ity, ary mbola mitohy. Andrasana koa ny Drafitrasa amin’ny famindrana ny mponina (PAR), satria misy fepetra tsy mbola feno.
Hatao indroa isan-taona ny fakan-kevitra toy izao, ka eto an-dRenivohitra ny iray, mahakasika ny ankapobeny sy ny firenena, ary ho an’ny renivohi-paritany enina teo aloha ny faharoa.